သင်တွေ့မြင်ရမည့်နှစ်သက်ဖွယ်အကောင်းဆုံးခွေးကလေးဗီဒီယို | Dogs World
အိုမီဟာဂိုး | | ခွေးများ
ရပ်! အကယ်၍ သင်သည်နှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းသည့်အရာအားလုံးကိုအထိခိုက်မခံလျှင်၊ ဤဆောင်းပါးပါ ၀ င်သောကြောင့်ဤဆောင်းပါးကိုသင်မဖတ်ပါရန်ကျွန်ုပ်အကြံပြုပါသည် ခွေးငယ်လေးတွေရဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုခင်ဗျားကြည့်လိုက်ရင်မင်းကိုမင်းချစ်ခြင်းမေတ္တာသေသွားစေလိမ့်မယ်။
ဘင်ဝီလျံကဆိုပါတယ်သောအခါ သင့်မျက်နှာကိုပွေးနေသောခွေးပေါက်ကောင်ထက်ကမ္ဘာပေါ်တွင်စိတ်ရောဂါဆရာ ၀ န်မရှိပါသူမှန်ခဲ့သည် ရယ်မောနေတဲ့ခွေးတစ်ကောင်ရဲ့ခြေရင်းနားမှာမကျတဲ့သူတစ်ယောက်ကိုသူ့ကိုအမြတ်ထုတ်ဖို့ကြိုးစားနေတာငါမတွေ့ဘူး။
ခွေးပေါက်စတွေရှိတယ် ကျွန်ုပ်တို့၏နေ့သည်တကယ့်ကျောက်ဖြစ်ခဲ့သည့်တိုင်ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်ဓာတ်ကိုမြှင့်တင်ပေးနိုင်သည့်စွမ်းအားဖြစ်သည်နှင့်ဤဆောင်းပါး၌ငါအဘယ်ကြောင့်သင်ပြပါမယ်။ အကြင်သူသည်ပထမ ဦး ဆုံးရယ်မောသောသူသည်ရှုံး!
အားကောင်းတယ်စကြစို့။ လွန်ခဲ့သောအချိန်ကကျွန်ုပ် YouTube ၏ချန်နယ်တွင်ဗွီဒီယိုတစ်ခုကိုတွေ့ရှိခဲ့သည် အိုးဒစ္စနေး သင်တစ် ဦး မြင်နိုင်ပါသည် ဒစ္စနေးဇာတ်ကောင်အဖြစ်ဝတ်ဆင်ခွေးပေါက်စများ၏စုဆောင်းမှုဂျက် Sparrow, Rapunzel သို့မဟုတ်အဲလ်ဆာကဲ့သို့။ အချို့က၎င်းတို့ကိုယ်စားပြုသောစရိုက်လက္ခဏာကိုယူပြီးပုံပြင်တစ်ပုဒ်အားယူကြပုံရသည် - Aladin နှင့် Yasmine၊ မှော်ကော်ဇောပေါ်တွင်ခမ်းနားထည်ဝါစွာပျံသန်းခြင်းကိုကျွန်ုပ်တို့နှစ်သက်ကြသည်။ Little Mermaid သည်ရှည်လျားသောအနီရောင်ဆံပင်များကိုလေထဲသို့ရွေ့လျားသော်လည်း LOL တွင်မည်သည့်အရာမျှမရှိပါ။
ဒါပေမယ့်ဒီကိစ္စကမပြီးဆုံးသေးဘူး ခွေးတစ်ကောင်သည်သူ၌အဘယ်ကြောင့်ခန်ဓာကိုယ်ခန်ဓာကိုယ်ရှိနေသည်ကိုသိရန်ကွိုးစားနေသလား။ အိုကေ။ ငါဘာကိုဆိုလိုသလဲဆိုတာရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိဘူးဆိုရင်၊ ဒီဗီဒီယိုကိုအရင်ကြည့်ပါ။
ပြီးတော့ ... နောက်ကျောထိုင်ခုံမှာထိုင်နေတဲ့ဘာ့ခ်ဒီဒီဗျူးဟာသူကိုယ်တိုင်မသိဘဲလှောင်ပြောင်နေချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကိုအရည်ပျော်သွားတယ်။
ခွေးခွေးပေါက်စများဟောင်ခြင်း၊ အစာစားခြင်း၊ အိပ်ခြင်းနှင့်မကောင်းသောအကြံပြုခြင်းဗီဒီယိုများများစွာရှိသည်။ အောက်မှာကြည့်လိုက်ရင်သူတို့ထဲကတချို့ဟာခွေးပေါက်စလေးတွေထဲကတချို့ပါ ဂျာမန်သိုးထိန်း, Beagle o ရွှေ retrievalအခြားသူများအကြား:
2 အသေးဆုံး Yorkshire ခွေးကလေး
3 အများဆုံးချစ်စရာကောင်း Beagle ခွေးပေါက်စ
4 အဆိုပါအကျဆုံးဆုံးသော Retriever ခွေးကလေး
ဒီခွေးဟောင်နေသည့်အခြားခွေးများကိုသူ၏အရွယ်အစားထက်သုံးဆပိုမိုစစ်ဆေးပါ။ အကယ် ဂျာမန်သိုးထိန်းများသည်သဘာဝအားဖြင့်ကောင်းသောအုပ်ထိန်းသူများဖြစ်ကြသည်ဤကိစ္စတွင်မူသူ၏ခြိမ်းခြောက်နေသောသားရဲနှင့်တူအောင်ကြိုးစားခြင်းသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အသိသာဆုံးနှင့်စာနာမှုအရှိဆုံးမြင်ကွင်းကိုသာဖြစ်ပေါ်စေသည်။
အသေးဆုံး Yorkshire ခွေးကလေး
နောက်ဗီဒီယိုတွင်သင်တွေ့လိမ့်မည် ကမ္ဘာပေါ်မှာအသေးငယ်ဆုံးခွေးအမြင့် ၇ စင်တီမီတာ၊ အကျယ် ၁၂ မီတာရှိပြီးအလေးချိန် ၁၅၀ ဂရမ်ရှိသည်။ မဟုတ်ဘူး၊ ဟမ်းစတားတော့မဟုတ်ပါဘူး၊ သူဟာ Yorkshire terrier တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးအခန်းပတ်ပတ်လည်ကိုခုန်ဆင်းပြီးသူ့အတွက်ကမ္ဘာပေါ်မှာအကြီးဆုံးဘောလုံးအားကစားရုံနဲ့တူတယ်။ သင်၏လက်ကိုသင်၏ပါးစပ်သို့သွင်းရန်အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီ
အများဆုံးချစ်စရာကောင်း Beagle ခွေးပေါက်စ
ငါ့ခွေးဟာ Beagle ပဲ။ ငါသူတို့သဘောသဘာဝအားဖြင့်အိပ်ချင်နှင့် chubby ဖြစ်ကြောင်းသင့်အားအာမခံနိုင်ပါတယ်။ သူတို့ဟာစားပြီးရင်နောက်မှအိပ်ချင်ကြတယ် သူတို့ကကစားခြင်း၊ ဖမ်းမိသမျှအားလုံးကိုကိုက်ခြင်း၊ အိပ်ခြင်းနှင့်အိပ်ခြင်းနှင့်စားချင်စိတ်ကို ပို၍ တောင့်တသောစားပွဲသို့ပြေးရန်ခေါ်ဆောင်ခြင်း၊။ သင်ရှိသေးလျှင်သင်အသက်ရှူရပ်သွားစေမည့်ဤဘီလင်းခွေးများကိုစစ်ဆေးပါ။
အဆိုပါအကျဆုံးဆုံးသော Retriever ခွေးကလေး
Boomer ရဲ့အလှည့်ပါ ငါအစဉ်အမြဲငါတွေ့မြင်အများဆုံးသြဇာနှင့်ရယ်စရာခွေးကလေးရွှေ Retrievers တစ်ခု။ သူ့ဘောလုံးနှင့်ရေကစားခြင်း၊ လှေကားထစ်များကိုအဆင်မပြေဆုံးနည်းဖြင့်သွားကြည့်ခြင်းသို့မဟုတ်သူ၏ကမ်းခြေရှိသူ၏တနင်္ဂနွေနေ့လည်ခင်း၌ပျော်မွေ့နေခြင်းကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်မဖြုန်းတီးပါ!
ဒီစုဆောင်းခြင်းကိုလက်လွတ်မသွားပါစေနှင့် ပြင်သစ်ဘူဒိုဇာခွေးငယ်လေးများသည်အိမ်များပတ် ၀ န်းကျင်တွင်မကောင်းသောအကြံအစည်များနှင့်အိပ်မောကျစွာအိပ်ပျော်နေကြသည်။ ဒီပေါက်ကွဲမှုဟာပထမ ဦး ဆုံးလရဲ့ဘဝကလူတွေနဲ့ပေါင်းသင်းရတာ၊ ပျော်စရာကောင်းပြီးပျော်စရာကောင်းတဲ့ဇာတ်ကောင်ပဲ။ ဒီသဘောသဘာဝကြောင့်နဂါးရဲ့မျက်နှာကိုထည့်လိုက်တာကငယ်ငယ်ကတည်းကအရမ်းရယ်စရာကောင်းပြီးဖော်ရွေတဲ့ခွေးတစ်ကောင်ဖြစ်စေတယ်။ ကြည့်ရှုရန်ဗွီဒီယိုကိုကြည့်ပါ -
ဒီခွေးကလေးခွေးတွေရဲ့ဗီဒီယိုဘယ်ဟာကိုမင်းကြိုက်ခဲ့သလဲ။ သင်၏ ၀ မ်းဗိုက်နှင့်ပတ်သက်သောသင်၏အတွေ့အကြုံကိုပြောပြရန်မမေ့ပါနှင့်။ သူ့ခွေးကလေးရဲ့လှောင်ပြောင်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမင်းပြောပြဖို့ဇာတ်လမ်းထောင်ချီရှိမယ်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ခွေးကမ္ဘာကြီး » အထွေထွေခွေးများ » ခွေးများ » သင်တွေ့မြင်ရဆုံးသောချစ်စရာအကောင်းဆုံးခွေးကလေးဗီဒီယို